Tambajotra mpangalatra Sprinter sy mpamono olona : 13 mianadahy indray voasambotry ny zandary | NewsMada
Tambajotra mpangalatra Sprinter sy mpamono olona : 13 mianadahy indray voasambotry ny zandary
Par Taratra sur 21/01/2016
Rava ny mpangalatra Sprinter eto an-drenivohitra. Tratra ihany koa ny tompon’antoka tamin’ny halatra Sprinter sy ny famonoana ny mpamily sy ny resevera an’ny fiara very teny Masindray…
Tratra ihany ireo tompon’antoka tamin’ny famonoana mpamily sy resevena Sprinter iray ary nangalatra ilay fiara, teny Masindray ny volana desambra lasa teo. 13 mianadahy izy ireo no voasambotra tamin’izany, izay nahitana ny mpamono olona, mpivarotra sy mpividy fiara, ireo mpiray tsikombakomba tamin’ny famadihana ny laharan’ny fiara, ny fandokoana, ny mpanao taratasy hosoka, sns.
Teny Ambodivona no tratra ilay fiara ny alatsinainy teo, izay saika hameno mpandeha ho any Toamasina. Nampanaovina taksiborosy mihazo an’i Toamasina ilay fiara io.
Araka ny fanazavana azo, notsindrian’ireo mpanova fiara tamin’ny alalan’ny “soudure” ny laharan’ny vatan’ny fiara. Efa niova tanteraka ny loko, izay tsy nisy nahafantarana azy intsony. Tratra daholo ireo mpiray tsikombakomba amin’ity famadihana fiara ity, izay nisy nosamborina teny Ankorondrano ny sasany. Voalaza fa nisy mpianatry ny oniverisite tsy miankina iray eto an-drenivohitra ny iray amin’ireto voasambotra ireto.
Tamin’ny alalan’ny fahatrarana tovovavy iray voalaza fa sakaizan’ny iray tamin’ireo mpikotrika ity asa ratsy ity no nahafantarana ny marina. Voasambotra teny Talatamaty, ny alatsinainy teo, ilay vehivavy sy ilay lehilahy avy any Mahajanga. Rehefa natao ny famotorana ireo tratra ka tamin’izany no nahalalana ireo mpiray tsikombakomba rehetra. Atolotra ny fampanoavana anio ireo olona ireo.